Sergio Busquets oo aqbalay inuu heshiiska u kordhiyo kooxdiisa Barcelona – Gool FM
Sergio Busquets oo aqbalay inuu heshiiska u kordhiyo kooxdiisa Barcelona
Haaruun May 27, 2016
(Barcelona) 27 Maajo 2016 – Sergio Busquets ayaa ogolaaday inuu heshiis cusub oo shan sanadood ah qalinka ugu duugo kooxdiisa Barcelona.
Barca ayaa maanta oo Jimce ah ku dhawaaqay inu xiddiga khadka dhexe ee reer Spain Busquets uu ku dhow yahay inuu qalinka warqadda dul dhigo, isla markaana uu saxiixo heshiis garoonka Camp Nou ku sii hayn doona ilaa bisha June sanadka 2021, waxaana uu dooq u haystaa inuu labo sano oo dheeri ah ku darsado, taasoo ku tiirsan safashadiisa iyo sida uu garoonka ugu soo bilowdo.
Kooxda haysata horyaalka Spain ee La Liga ayaa shaacisay in 27 sano jirkaan, kaasoo heshiiskiisa lagu burburin karo €200 milyan, uu saxiixi doono heshiiskan cusub maalmaha soo socda.
Busquets oo ka soo qalin jabiyey machadka tababarka da’yarta kooxda Barcelona ee La Masia ayaa siddeed sanadood oo uu u ciyaarayey kooxda waa weyn ee safka hore kula guuleystay lix horyaalka La Ligaha Spain ah, saddex Champions League iyo afar Copa del Rey.
Xiddiga ku guuleystay koobka Adduunka ayaa haatan ku maqan waajibaadka xulkiisa qaranka Spain, iyadoo uu xulkiisu eeganayo inuu markiisii saddexaad oo xiriir ah ku guuleyso koobka qaramada Yurub ee sanadkan lagu qabanayo Waddanka Faransiiska.